Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny Linux Kernel 5.13 miaraka amin'ny fanohanan'ny Apple Silicon | Avy amin'ny mac aho
Linux mandeha amin'ny lamasinina haingam-pandeha antsoina hoe Apple Silicon koa ianao. Mijanona ho an'i Microsoft ihany koa ny mandefa ny Windows ARM mifanaraka amin'ny M1, ary hakatona ny faribolana. Tsy misy isalasalana, vaovao lehibe ho an'ireo mpampiasa Macs vaovao.
Ka raha manana iray amin'ireo Mac vaovao misy processeur M1 ianao dia azonao atao ny mametraka ny rafitra fiasa Linux ankoatry ny macOS. ny Kernel 5.13, efa mandeha an-tanindrazana amin'ny Apple Silicon vaovao. Raiso izao.
Desambra lasa teo, sahady naneho hevitra izahay fa misy kinova vaovao amin'ny Linux Kernel no nokasaina hihazakazahana amin'ny Macs vaovao Processeur M1. Ary enim-bolana aty aoriana, ity tetikasa ity dia efa misy zava-misy amin'ny kernel vaovao 5.13 an'ny rindrambaiko maimaim-poana an'ny penguin.
Ny kernel Linux 5.13 vaovao dia manampy fanampiana chips isan-karazany mifototra amin'ny maritrano ARM, ao anatin'izany ny Apple M1. Midika izany fa ho afaka mihazakazaka Linux amin'ny alàlan'ny M1 MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, ary iMac 24-inch vaovao ireo mpampiasa.
Hatramin'izao dia azo atao ny mitantana Linux amin'ny M1 Macs amin'ny alàlan'ny milina virtoaly ary na dia misy seranan-tsambo Corellium aza, saingy tsy misy amin'ireo alternatives ireo no nihazakazaka tanindrazana, midika izany fa tsy nanararaotra ny fahombiazana farany vita tamin'ny processeur M1 izy ireo. Na izany aza, nisy ny mpamorona sasany niasa mba hampiditra ny fanohanan'ny teratany ny M1 ao amin'ny kernel Linux, ary izao dia lasa zava-misy izany.
Ny kernel Linux 5.13 vaovao dia mitondra vaovao endri-javatra fiarovana toy ny Landlocked LSM, manohana an'i Clang CFI izy ary tsy voatery ho diso ny valin'ny voan-kernel isaky ny fiantsoana rafitra. Misy ihany koa ny fanohanana ny protokol HDMI FreeSync.
Ka ireo mpampiasa ny Mac1 processeur vaovao MXNUMX dia afaka manana rafitra miasa roa ao amin'ny masinin'izy ireo izao: macOS y Linux. Windows, amin'izao fotoana izao, dia mbola mihazakazaka saika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Bootcamp » Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny Linux Kernel 5.13 miaraka amin'ny fanohanan'ny Apple Silicon